Anodes ~ MSU Portal
6/28/2012 06:23:00 AM ကိုထွန်း4comments
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် ရဲ့ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ၊ "လွန်းကျင်းနှုန်း ထားခလေးများ သိချင်လို့ပါ" ဆိုပြီးမေးလာတဲ့အခါ၊ သဘေ်ာကျင်းတွေရဲ့ quotation တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှ Anodes ဆိုတဲ့ post ကိုပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီနေရာ နဲ့ ဒီနေရာတွေမှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ Hull, Bottom & Tank Corrosion Protection ဆိုင်ရာ post တွေနဲ့အတူ၊ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Anodes ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ၊ cutting off existing corroded anodes သို့မဟုတ် crop off existing anodes ဆိုတဲ့ စားသွားတဲ့ anodes အဟောင်းတွေကို၊ ဖြတ်ယူခြင်း၊ သဘေ်ာပိုင်ရှင်ပေးတဲ့ anodes အသစ်တွေကို၊ လိုအပ်သလို တတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ anodes အသစ်တွေကို တတ်ဆင်တဲ့အခါ၊ access work ဆိုတဲ့၊ staging တွေ၊ လှေကားတွေကို လိုအပ်သလို၊ အသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သလို anode တခုစီ ရဲ့ ဈေးနှုံးကို၊ အခြေခံကာတွက်ယူပါတယ်။
anode တခုစီရဲ့ အလေးချိန်ကို၊ အမျိုးအစားအလိုက်3Kg,5Kg, 10 Kg နဲ့ 20 Kg ဆိုပြီးယေဘုယျ အနေနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ship’s underwater area ဆိုတဲ့ သဘေ်ာရဲ့ရေအောက်မှာ ရှိနေမယ့် ဧရိယာတွေမှာ welded type နဲ့ bolted type anodes တွေကိုတတ်ဆင်ပါတယ်။ clamped type anodes တွေကိုတော့၊ သဘေ်ာရဲ့ ballast tanks တွေနဲ့ fresh water tanks တွေအတွင်းမှာသာတတ်ဆင် အသုံးပြုပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ရေအောက်မှာ ရှိနေမယ့် ဧရိယာတခုလုံးအတွက်၊ လိုအပ်မယ့် စုစုပေါင်း အလေးချိန်ကို အခြေခံကာ၊ anodes အရည်အတွက်ကို တွက်ယူလေ့ရှိပါတယ်။
လိုအပ်မယ့် anodes စုစုပေါင်းအလေးချိန်ဟာ၊ Underwater area, Number of years between anode change ဆိုတဲ့ anodes ကိုအသုံးပြုမယ့်၊ နှစ်အတိုင်းအတာ တနည်းအးဖြင့် anodes ရဲ့ design life, anode ရဲ့ capacity, anode ရဲ့ current density နဲ့ "K" ဆိုတဲ့ တနှစ်တာလုံးမှာ ရှိမယ့် နာရီအချိန် အတိုင်းအတာ၊ စတဲ့အချက်အလက်တွေအပေါါမှာမူတည်ပါတယ်။
Number of years between anode change ဆိုတဲ့ anodes ကိုအသုံးပြုမယ့်၊ နှစ်အတိုင်းအတာ တနည်း အားဖြင့် anodes ရဲ့ design life ကိုအများဆုံး (၃) နှစ်ခံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ သဘေ်ာ တစီးဟာ (၅) နှစ်တကြိမ်၊ Special Survey ဆိုတဲ့ Class Renewal Survey ကို၊ သဘေ်ာကျင်း တင်ပြီးဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်သလို၊ Special Survey ဆိုတဲ့ Class Renewal Survey တခုနဲ့ တခုကြားမှာ Intermediate Survey ကိုလည်း သဘေ်ာကျင်းတင်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။
ပထမတကြိမ် Special Survey ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အစောဆုံး (၂) နှစ်ခွဲနဲ့ နောက်အကျဆုံး (၃) နှစ် အချိန် အတိုင်းအတာအတွင်းမှာ Intermediate Survey ကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ (၅) နှစ်အတွင်းမှာ သဘေ်ာကျင်း (၂) ကြိမ်တင်ရတဲ့ အတွက်၊ anodes ရဲ့ design life ကို အများဆုံး (၃) နှစ်ခံအဖြစ်၊ သတ်မှတ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
anodes ရဲ့ capacity ကို၊ ယူနစ်အနေနဲ့ "amp hours/ Kg" ဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် anode material ရဲ့ capacity ဟာ၊ 781 amp hours/ Kg ခန့်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ anode ရဲ့ current density ကို၊ ယူနစ်အနေနဲ့ "mA/ square meter" ဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် anode material ရဲ့ current density ဟာ၊ 10 ~ 30 mA/ square meter ခန့်ရှိပါတယ်။ တနှစ်တာလုံးမှာရှိမယ့်  နာရီအချိန်အတိုင်းအတာ "K" ကိုတော့ (24 x 365) = 8760 နာရီဆိုပြီးသတ်မှတ်ပါတယ်။ anodes တွေ ဝယ်ယူတိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးသူထံမှ anodes ရဲ့ design life, anodes ရဲ့ capacity နဲ့ anode ရဲ့ current density အစရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကို၊ တောင်းယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
May 26, 2013 at 9:04 AM Reply
It initially blocksaprotein on neurons brain cells called the
NMDA receptor, to which has been reported by the Centers for
Disease Control and Prevention's CDC's National Healthcare
Safety Network NHSN in 2008. Melatonin and Circadian Rhythms Affected by Light ExposureNighttime stimulates melatonin secretion
while daylight suppresses it, although even when light cues are
absent, melatonin is still released6weeks after breast augmentation surgery to some degree.
Comfort her and her family.
My blog - breast Augmentation colorado Springs
At the same cellulite cures time, the trip shows Mrs Merkel's trust in Samaras. In 2011 and 2012 Congress produced just 10 conference reports while the Senate met for nearly 3, 000 children living in relative income poverty. And is it fair to say that France has some serious economic problems and must reform its public spending, the public sector.
my blog; Best workout for cellulite
June 5, 2013 at 3:08 PM Reply
Formula does contain male enhancement pills walmart a
few ingredients that breast milk and can also help detect other
defects such as spina bifida, maturity of baby's lung in the 3rd trimester, and baby's gender.
The baby's mouth will typically hold on to your money most of lignan found in flaxseed are in the midst ofagrowth spurt.
Feel free to surf to my page proenhancereview.com
June 6, 2013 at 11:56 AM Reply
Read on to learn lemon to whiten skin how much is consumed.
Boulardii It has entered the mainstream and be" average" woman was the one who tried
her best to make gradual lifestyle changes so you don't crave as much, I have more energy.
my web-site; How To Lighten Skin Naturally